‘परदेशीका श्रीमतीलाई आफ्नै गाउँका छोरी, बुहारी सम्झेर व्यवहार गर्न जरुरी छ’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
असार ३१, २०७८ बिहिबार १७:१६:८ | उज्यालो सहकर्मी
श्रीमान् कमाउन गएपछि घर व्यवहार, बालबच्चा सबै सम्हालेर श्रीमानलाई कमाउन सघाउने महिलाको योगदानको कदर गर्नुको साटो हाम्रो समाजमा किन उनीहरूलाई नकारात्मक व्यवहार गरिन्छ ? उनीहरूलाई गर्नु पर्ने सही व्यवहार कस्तो हो ?
हिलाको एकल पहिचानलाई अस्वीकृत गरिएको हो । अस्वीकृति गरेपछि जस्तो व्यवहार गरे पनि भयो । हेला गरे पनि भयो, जस्तो व्यवहार गरे पनि भयो ।
आजकाल हाम्रो समाजमा धेरैको घरको चुलो रेमिट्यान्सबाट बल्छ । तर तिनै रेमिट्यान्स पठाउनेका घरका महिलालाई गाउँ समाजमा यस्तो व्यवहार हुँदा यसको असर महिला स्वयम् र समाजमा कस्तो पर्छ ?
श्रीमान् परदेश जाँदा केही समयका लागि एक्ली भएकी महिला एकातिर र हाम्रो सिङ्गो समाज एकातिर हुन्छ । यो लडाइ ठुलो छ । हाम्रो समाजमा कानुनभन्दा पनि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता कडा र बलिया छन् यसलाई तोड्न समय लाग्छ ।
समाज यस्तै हो, यो समाज यस्तै हुँदा पनि मैले गल्ती गरेका छैन र हाम्रो सम्बन्धलाई टुट्न दिनुहुँदैन भनेर लाग्नुपर्छ ।
परिवारको ठुलो भूमिका रहन्छ यसमा । महिला त नयाँ हुन्छ, आफ्नो घर परिवार छाडेर त्यो घरमा आएको हुन्छ । त्यस कारण उसलाई सहज वातावरण बनाउनको लागि पुरुषले नै भूमिका खोल्नुपर्छ ।